मोसेस र मुसा रोक्ने, मेस्सीले ठोक्ने - Dainik Nepal
क्रोएसीयाको गोल मद्दत र आफ्नै संघर्षले मात्र अर्जेन्टिना अन्तिम १६ मा पुग्न सक्छ
दैनिक नेपाल २०७५ असार १० गते १२:२३
काठमाडौं, १० असार । विश्वकप समुह ‘डी’को खेलको अन्तिम सूचीमा रहेको महान् खेलाडी लियोनल मेस्सीको देश अर्जेन्टिनाको भविष्यका लागि उनका फ्यानहरूले दुई दिन अघि नाइजेरियाको जीतका लागि प्रार्थना गरे । समुहमा एक खेल पराजय भोगेको नाइजेरियाले आइसल्यान्डलाई हराउँदा अर्जेन्टिनाको विश्वकप अन्तिम १६ मा पुग्न सक्ने आशा कायम हुन्थ्यो । नभन्दै, नाइजेरियाले आइसल्यान्डमाथि २–० को जीत निकाल्यो ।
इंग्लिस प्रिमियर लिगको लेस्टर सीटिका स्ट्राइकर अहमद मुसाको दुई उत्कृष्ट गोलले अर्जेन्टिना भविष्यमा तंग्रिनसक्ने संकेत मिल्यो । तर अर्जेन्टिनी फ्यानले जीतका लागि प्रार्थना गरेको नाइजेरियामाथि राम्रो जीत निकाल्नुपर्ने चुनौति अर्जेन्टिनाकै अगाडीमात्र छैन, उसको भाग्य बराबरीमा रोकेको आइसल्यान्डमाथि ग्रुपकै अब्बल क्रोएसियाको जीत अनिवार्य देखिन्छ । क्रोएसीयाको बराबरीले पनि अर्जेन्टिना अन्तिम १६ मा पुग्नेछैन किनभने उसको गोलअन्तर फराकिलो भएकाले अन्तिम नम्बरमा परेको हो ।
अर्जेन्टिना पुग्न अब के हुनुर्पछ ?
अन्तिम १६ मा पुग्न अर्जेन्टिनासँग दुई विकल्प छन् । ‘ग्रुप अफ डेथ’ भनिएको टोलीको अब्बल लुका मोड्रिकको क्रोएसीयाले आक्रामक रणनीति लिँदै आइसल्यान्डमाथि जीत निकाल्यो भने अर्जेन्टिनाले नाइजेरियामाथि सामान्य जीत निकाले पनि अंकका आधारमा ग्रुपको उपविजेताको हैसियतले अन्तिम १६ मा उसको सहभागीता हुनेछ ।
क्रोएसीयाले बराबरी खेलेको खण्डमा अर्जेन्टिनाले नाइजेरियामाथि ठूलो गोलान्तर निकाल्नुपर्छ । किनभने अर्जेन्टिना अहिले नै माइनस ३ गोलान्तरमा छ । जबकी सम्भावना बोकेको नाइजेरियाको गोलान्तर शुन्य र आइसल्यान्डको माइनस २ मात्र छ । क्रोएसीयाको जीतसँगै सम्भावित चुनौति पार गर्न सके अर्जेन्टिना ४ अंकसहित दोस्रो नम्बरमा हुनेछ ।
अर्जेन्टिनी फ्यानले फेरि प्रार्थना गरुन् कि क्रोएसीया झुक्किएर पनि पराजित नहोस् । क्रोएसिया पराजित भएको खण्डमा अर्जेन्टिनाको कुनै पनि प्रकारको जीतले उसलाई अन्तिम १६ मा पुग्ने बाटो दिनेछैन । किनभने दुई खेलामा फराकिलो जीत निकाल्दै क्रोएसीया अन्तिम १६ का लागि सुरक्षित छ ।
कस्तो हुनुपर्छ अबको खेल ?
क्रोएसीया र आइसल्यान्डको खेललाई एक छिन छाडेर अर्जेन्टिनाको नीतिको कुरा गर्ने हो भने उसले नाइजेरियाका दुई खेलाडीलाई रोक्न सक्नुपर्छ । नाइजेरियाका लागि पनि गर या मरको खेल भएका कारण उसले आफ्नो सबै ताकत अर्जेन्टिनाविरुद्ध प्रयोग गर्नेछ । त्यसैले सन् २०१४ को विश्वकपमा अर्जेन्टिनाविरुद्ध २ गोल गरेका र यस पटक आइसल्यान्डविरुद्ध पनि दुई गोल निकालेका अहमद मुसाले भनेका छन्,‘अर्जेन्टिनाविरुद्ध गोल निकाल्न असहज छैन ।’
इंग्लिस प्रिमियर लिगको चेल्सीका विंगर भिक्टर मोसेस र मुसालाई रोक्दै आफ्नो सबै ताकत नाइजेरियाको जाली चुमाउनका लागि अर्जेन्टिनाले प्रयोग गरेन भने उसको २०१८ को विश्वकपयात्रामा पुर्णविराम लाग्नेछ । यता, मोसेस र मुसा रोक्ने, मेस्सीले गोल ठोक्ने रणनीतिमा अर्जेन्टिना उत्रिनुपर्छ । उता, क्रोएसीयाले आइसल्यान्डमाथि नैतिकताकै लागि पनि जीत निकालेको खण्डमा अर्जेन्टिना ‘नकआउट’ चरणमा पुग्नेछ । अन्यथा अन्य कुनै उपाय छैन ।
क्रोएसीयाको कस्तो खेल हुनेछ ?
क्रोएसीयाको डिफेन्स लाइनबाहेक मिडफिल्डका बलिया खेलाडी हुन् स्पेनीस लिग रियल मड्रिड मिडफिल्डर तथा कप्तान मोड्रिक, बार्सिलोना डिफेन्सिफ मिडफिल्डर इभान र्याकिटिक र इटालियन लिग जुभेन्टसका विंगर स्ट्राइकर मारियो म्यान्जुकिच । अन्तिम १६ मा पुग्ने निश्चित भएका कारण यी तीनै खेलाडीलाई रेस्ट दिँदै आइसल्यान्डविरुद्धको खेलमा अन्यलाई उतार्ने सम्भावना बढि छ ।
क्रोएसियाका प्रशिक्षक ज्लाट्को डालिकले यस्तो निर्णय लिएको खण्डमा गर कि मरको अवस्थामा रहेको आइसल्यान्डले सबै ताकत लगाएर खेल आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसो हुँदा अर्जेन्टिनाको केही सीप लाग्दैन । क्रोएसीयाको आफुमात्र सुरक्षित हुने निर्णय रहेको खण्डमा अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक जर्ज साम्पाओलीले निराशाको सपना बोकेर २०२२ को तयारीमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।
ग्रुप अफ डेथका दुई खेल विश्वभर प्रतिक्षाको बन्नुको कारण पनि यहि हो । खासगरी क्रोएसीया र आइसल्यान्ड तथा अर्जेन्टिना र नाइजेरियाका यी दुई खेल मंगलबार राती पौनो १२ बजे एकै समयमा हुनेछन् । त्यसैले अर्जेन्टिनाको भाग्य निर्धारण गर्नेछ ।